လက်ရှိ အခုရောင်းပေးနေတဲ့ Firmware list တွေ.Error Fix file လေးတွေနဲ့ ဈေးနှုန်းလေးကတော့ .အောက်ကအတိုိင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
လက်ရှိ အခုရောင်းပေးနေတဲ့ Firmware list တွေ.Error Fix file လေးတွေနဲ့ ဈေးနှုန်းလေးကတော့ .အောက်ကအတိုိင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Tuesday, August 30, 2016 androidfirmware No comments
စကားဦးအနေနဲ့ စမ်းပီးအောင်ထားသော Display Fix , Vibrate Error Fix , Mtk Dead Fix Firmware များနဲ့ Huawei Board Firmware များ ,Xiaomi Fastboot Rom(Pattern,Pin Remove Firmware)များ ပါဝယ်ယူနိုင်ပါပီခင်ဗျ. (CALL- 09792647058,09971558137)
1000 GB or 2000 GB Harddisk ထဲထည့် ပေးပါတယ်.
Harddisk ၀ယ်ဖို့ အဆင်မပြေသူများနှင့် နယ်က မှာယူချင်သူတွေအတွက်
ဘဏ်မှ တစ်ဆင့် ငွေလွဲရုံဖြင့် Hardisk + Data ပါ တစ်ခါတည်း အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်. (ဒီလိုပြောလို့ လူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ယုံဖို့ ခက်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် မလွဲခင် ကျနော် အဲ့လို လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ လူတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး သူတို့တွေကို ဖုန်းဆက်ပီး မေးနိုင်ဖို့ လည်း စီစဉ်ပေးမှာပါ)
Hardisk ဈေးနှုန်းတော့ ကိုယ့်နယ် မှာ တစ်ခါတည်းစုံစမ်းထားပါ.
မှတ်ချက်။ 2000 GB ၀ယ်ယူအားပေးသော Customer များကို Huawei Board Firmware များ ၊ Xiaomi Pattern.Pin Unlock Firmware များ၊ Huawei mtk Dead Fix Firmware များပါ တစ်ပါတည်း လက်ဆောင် အနေနဲ့ ထည့်သွင်းပေးသွားမှာပါ..
တွေ သပ်သပ် လိုချင်လည်း ရပါတယ် ငွေကျပ် ၁၅၀၀၀ ဖြင့် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်.
Credit to Ko Aung Khant